यस्तो छ पछिल्लो तिन वर्षको अर्धवार्षिक आम्दानी तथा खर्च - Aarthiknews
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९ Tuesday, 17 May, 2022
यस्तो छ पछिल्लो तिन वर्षको अर्धवार्षिक आम्दानी तथा खर्च
काठमाडौं । सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ । सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतार चढाव देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजश्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको थियो ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शुन्य दशमलव ९६ प्रतिशत कम हो । प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो ।
समीक्षा अवधिको चालु र वित्तीय खर्चमा भने केही उतार चढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत भएको थियो भने वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकोमा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकोमा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर बढी भएको देखिएको छ ।
अन्नपूर्ण चिनी मिलका सञ्चालकसहित १३२७ ऋणी कालोसूचीमा
यस्तो छ आज सुनचाँदीको भाउ
जेठ ३ गते मंगलबार डलरको भाउ कति ?
गहुँ निर्यात प्रतिबन्धको पक्षमा किन बोल्यो चीन ? मूल्य ६० प्रतिशतले बढ्यो
लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच एमओयू भएका ६ वटा महत्वपूर्ण विषय यी हुन
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर १ अर्ब ६५ करोड नोक्सानीमा
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस शेयर सूचीकृत
युक्रेनको जवाफी हमलाका कारण रुसी सेनाहरु सीमा छाड्दै
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पाँचवटा काउण्टर
उदयपुरका चार गाउँपालिकामा गठबन्धन विजयी
श्रीलंकाको परिस्थिति कठिन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरे यस्तो आह्वान
रिभर फल्सको आईपीओमा आवेदन दिने बुधबार अन्तिम दिन
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले बोलायो साधारण सभा, लाभांश नदिने
कामपामा अझै बालेन्द्रकै अग्रता कायम, कुन कुन वडाको मत गणना भइरहेको छ ?
काठमाडौं उपत्यकाको नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीको अग्रता
भरतपुरमा विजय सुवेदीको अग्रता कायमै, यस्तो छ पछिल्लो मतपरिणाम
बाइस वर्षे युवाले निर्वाचनमा रचेको इतिहास....
अमेरिकामा मन्दीको खतरा
बालेन ४५ सय मतले अगाडि, सिर्जना र स्थापितको मतअन्तर पनि बढ्दै
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका ४ मा प्यानलनै स्वतन्त्रले जिते
भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः दाहालको अग्रता
राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ सुरु
वैशाख ३० गते सार्वजनिक सवारी नचल्ने, आन्तरिक उडान पनि बन्द
बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहकलाई विभिन्न स्थानहरुमा ४५ प्रतिशतसम्म छुट
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकले डिजिटल भुक्तानी गर्दा २५ प्रतिशत पाउने
एमसीसी अनुमोदनको प्रभाव : दुई महीनामा खर्बभन्दा बढीको अमेरिकन सहयोग
निर्वाचनको दिनका लागि सवारी पास लिने प्रक्रिया यस्तो छ
दुई वटा रेल किनिए, एउटा मात्र चल्छ
कृषिको रूपान्तरणबाट उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्ने योजना छः अर्थमन्त्री शर्मा